TAARIIKH NOLOLEEDKII AHN MARXUUM CABDILAAHI OOMAR CAWAALE OO MAANTA HARGEYSA LAGU AASAY | Toggaherer's Weblog
Akhristayaal waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa taariikh-nololeedkii Marxuum Cabdilaahi Oomaar Cawaale oo ka mid ahaa Odayaasha waawayn ee reer Somaliland, islamarkaana lagu aasay Hargeysa.
Taariikh-nololeedka Marxuumka oo aanu ka soo helnay ehelka Marxuumka, ayaa qoraal ay soo saareen oo ka waramay taariikh-nololeedkiisii wuxuu u dhignaa sidan;
“Marxuum Cabdilaahi Oomaar Cawaale wuxuu ku dhashay Magaalada Luuq ee Soomaaliya. Tacliintiisii, wuxuu ka baxay Dugsigii sare ee Waxbarashada ee Vacationer Training Center (VTC) eek u yaalay Magaalada Sheekh ee Somaliland sanadkii 1945-kii. Intaa ka dib wuxuu tegay Dugsiga sare ee Tababarka ee Ganaccsiga iyo maaraynta ee Cadan (Commercial College Aden). Waqtigaas oo ay Magaalada Cadan ahayd Magaalooyinkii ugu horeeyay ee Ganacsiga iyo ilbaxnimada Caalamka.
Waxyaabihii uu soo qabtay Marxuumku intii uu noolaa:
Markii ugu horraysay waxa gacan qabtay Ganacsadihii weynaa ee Jirde Xuseen, isla markaana uu la shaqeeyay. Wuxuu aasaasay Shirkaddii ugu horraysay dalka ee la odhan jiray Oomar Company sanadkii 1957-kii. Waqtigaas waxa uu bilaabay Madbacaddii u horraysay Madbacadaha Casriga ah ee Modern Printing oo la odhan jiray Al-Liwa oo ah Calanka.
Wuxuu Muqdisho u digo-rogtay waqtigii Soomaaliya iyo Somaliland laysku daray oo uu halkaas ka sii waday Ganacsigiisii. Waxa kale oo uu sameeyay Ganacsi casri ah oo qayb kasta leh heer qaran iyo heer Caalami ahba lahayd. Wuxuu tartan adag la galay raggii Ganacsiga ku lahaa Xamar ee ajaanibka ahaa, sida Talyaaniga, isla markaana uu ka hor maray. Guulihii uu gaadhay wuxuu abuuray cadow badan, taas oo kaliftay in uu ganacsigiisii ula wareego Magaalada London sanadkii 1967-kii. Balse waxa uu waddanka gudihiisa dib shaqooyinkiisa uga furmeen sanadkii 1974-kii. Waxaanu Somaliland dib u soo degay sanadkii 1996-kii, oo uu ilaa hadda ku noolaa.
Marxuum Cabdilaahi Oomaar Siyaasadda muddo dheer ayuu ku soo jiray, waxaanu ka mid ahaa aasaasayaashii Ururkii dhalinyarada Dugsiyada ka soo baxay ee Al-Madar, waxaanu noqday Lacag-hayihii koowaad ee Ururkaas, isla markaana wuxuu gelin jiray hantidiisia gaar ahaaneed oo uu Ururka ku taageeri jiray.
Sanadihii 1953-kii ilaa 1958-kii wuxuu noqday Madaxweynihii labaad ee Ururka Al-Madar. Sidaa darteed, Ururka Al-Madar waxay ka qayb qaadatay raadinta Hawd Saver Area (Gobolladii uu Ingiriisku bixiyay) iyo ololaynta Xornimadii Somaliland. abuuristii Xafiiskii NUF-ta oo loo xil saaray dhulkii maqnaa ee HAWD SAVER AREA iyo xornimadii. Waxaanu waqtigaas sameeyay 1957-kii Jariirad Magaceeda la odhan jiray Al-Liwa ee qaybta wayn ka qaadatay Halgankii gobonimo-doonka Somaliland.
Sanadkii 1957-kii Marxuumku Allaha u naxariistee wuxuu isku soo taagay Madaxweynenimada Somaliland, laakiin Dastuurka dalka ayaa sheegayay in labadii sanadood ee u dambeeyay aanu dalka joogin, taas ayaan iska hor taagtay Murashaxnimadiisii.
Waxyaabaha kale ee Marxuumka lagu xusuusto, waxa ka mid ahaa;
-Wuxuu ahaa ninkii u horreeyay ee keenay dalka Ururka Laanqayrta cas waqtigii isticmaarka, hawlaha ay qaban jireena qayb laxaad leh ayuu ka qaadan jiray. Waxa kale oo uu u ololayn jiray waxbarashada gaar ahaan Hablaha oo uu aad u dhiirigelin jiray. Wuxuu aad u caawin jiray dhalinyarada xag dhaqaale iyo xag guubaabo labadaba.
-Sanadkii 1967-kii ilaa inta uu ka soo noqonayay wuxuu ahaa Odayga Soomaaliyeed oo aad u gacan qabtay mid Caafimaad u taga, mid Tacliin u taga iyo dad kale ee hawlaha kale u taga Ingiriiska. Sidaa darteed, waxa la odhan karaa wuxuu ahaa Safiir u fadhiya Umadda Soomaaliyeed dalka Ingiriiska.
Shaqsiyaddiisa gaarka ah waxa ka mid ahaa;
-Wuxuu ahaa Marxuumku nin daacad ah.
-Nin deeqsi ah oo gacantiisa meel walba gaadhay, cid walbana wax taray.
-Wuxuu ahaa nin indheer-garad ah oo aragti fog.
-Wuxuu ahaa nin naxariis badan oo qaddiyado badan qaata.
-Muu ahayn nin Qabiili ah, wuxuu ahaa nin waddani ah.
Waxyaabaha waddaniyaddiisa u astaanta ahaa waxa ka mid ah, in uu diiday in uu qaato Baasaboor aan ka Soomaaliga ahayn, waxaanu doortay in uu dalkiisa ku soo noqdo oo uu ku noolaa.
-Marxuum Cabdilaahi Oomaar wuxuu yaqaanay Qiimaha uu waqtigu leeyahay, waxa uu sheegay in uu yidhi, waligay Makhaayad maan fadhiisin oo kama sheekayn.
Wuxuu ahaa Nin qoys: Noloshiisa oo dhami waxay ku dhisnayd qoyskiisa, wuxuu ahaa aabbo jecel Ubadkiisa, naxariis badan u leh, waxaanu ugu dedaalay in uu siiyo Tacliinta u wanaagsan, waanu ku liibaanay inay ka soo baxeen Jaamacadda ugu wayn dalka ingiriiska ee Oxford iyo Cambridge.
Wuxuu ifka kaga tegay:
Allaha u naxariistee Marxuum Cabdilaahi Oomaar wuxuu ifka kaga tegay Xaaskiisa Sahra Cabdulqaadir, Innamadiisa oo kala ah, Maxamed Cabdilaahi Oomaar, Raage Cabdilaahi Oomaar. Hablihiisa oo kala ah, Raaqiya Cabdilaahi Oomaar iyo Saynab Cabdilaahi Oomaar.
Ilaahay Jannadii ha ka waraabiyo, inagana samir iyo Iimaan ha inaga siiyo.